ရှေးအာဖရိကရှိလူမည်းအမျိုးသမီးနေရာ - Afrikhepri Fondation
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 17, 2020
ထို့ကြောင့်ကပထမဦးဆုံး Homo Sapiens Africanus ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခြင်းဖြင့်ကျန်ရစ်ပင်ရှေးဟောင်းသုတေသနအကြွင်းအကျန်အနက်ရောင်မိန်းမတို့အဘို့ယောက်ျားများ၏ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုထေူသော။ ကြည့်ဖို့လွယ်ကူသည် အမှန်စင်စစ်ဤအကြွင်းအကျန်များအားဖြင့်အနက်ရောင်အမြိုးသမီးမြား၏ statuettes (ဗီးနပ်စ်, ကလေးမွေးဖွား၏နတ်ဘုရား ... ) ဖြစ်ကြသည်။
ရှေးခေတ်အာဖရိက (အဲဂုတ်တုပွညျ / Nubia / အီသီယိုးပီး) တွင်
ထိုမိန်းမသည်မသာသူမ၏ကျား, မများကဒါပေမယ့်လည်းမိမိအဘုရားပကတိအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆက်လက်တိုးပွားဖို့အသက်ကိုပေးနိုင်စွမ်း, (Messou မက်ဆီ) ရှိပြီးသောအရာဖြစ်ပါသည်။ သူ၏အခြေခံသဘောသဘာဝကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် deified ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကလူကိုရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းတစ်ခု quadruple သဘောထားအမြင်အတော်ပင်အကြောင်း, တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာသူမမိခင်, မယား, ထိုနတ်ဘုရားမများနှင့်အစ်မသည်။ အထိုင်များနှင့် matriarchy ထံမှအမွေဆက်ခံ, ဒီလူမှုရေးအမြင်ရှေးခေတ်အာဖရိက၏ဝိညာဉျစံနမူနာထင်ဟပ်:
ဉာဏျပညာ, အမှန်တရားနှင့်တရားမျှတမှု (Maat) ၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်,
ဖာရောဘုရင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာ Anuket နတ်ဘုရားမတစ်ဦး Nubian မှအပ်နှင်းခဲ့သည်
Isis Osiris ၏ဇနီးနှင့်အစ်မနှစ်ဦးစလုံးကြီး
မိခင်သူမ၏အမျိုးအနွယ်အားဤတိရိစ္ဆာန်ကွောငျ့အာရုံ၏လင်းတအားဖြင့်ရုပ်စာအရေးအသား designated ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်နတ်ဖုရားကဲ့သို့ရှေးအာဖရိကန်သူတို့ရဲ့အနုပညာအကျင့်ကိုကျင့် (ပန်းချီ, ပန်းပု, etc ... ) အတွက် (အဝါရောင်, ရွှေနတ်ဖုရား၏ဇာတိပကတိဖြစ်၏) ရွှေသူတို့မယားကိုယ်စားပြုသည်။
ဒါဟာလူကိုများသောအားဖြင့်သူ့ဇနီးနှင့်အတူပုံဖော်, ဒါမှမဟုတ်သူ့ဇနီးနှင့် (အရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့သူမ၏အသိုင်းအဝိုင်းများကြောင်းဥပမာ) တစ်ခုနတ်ဘုရားမများအကြားထားရှိကြောင်းသတိပြုပါရန်နေဆဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
"သားတော်ကိုလေးစားမှု, နူးညံ့သောအိမ်ထောင်ဖက်, စေ့စေ့နားထောင်မိဘများနှင့်မကြာခဏအလိုလိုကျလှနျးခွငျး, သူတို့ကြီးမြတ်ဂုဏ်အသရေအတွက်ခဲ့သီလလေ့ကျင့်ရန်, နည်းလမ်းအဖြစ်ဖော်ပြထားနိုင်မယ့်ဇွဲထက်သန်နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ တဖန်တုံ, သူတို့ကိုအညီ, သူတို့အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်စံနမူနာ, "ဧလိရှဗ Laffont (အဖာရောဘုရင်၏ဉာဏျပညာ, ed ၏စာအုပ်များကြည့်ရှုပါ။ ဖိုလီယို) ကပြောပါတယ်။
ရှေးခေတ်အာဖရိကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနိုင်ငံခြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးထို့ကြောင့်သည်, မိန်းမမူကားယောက်ျားသည်အိမ်ရှင်မ, အပုဂ်ဂိုလျတစျဦးဣတ်အလှတရား, တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဉာဏ်ပညာ၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖန်တီးမှုကိုနှစ်သက်, အစ်မများ၏လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည် တစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွားမီးပွားတစ်ဦးဂရုစိုက်တတ်တဲ့မိခင်နှင့်အနာဂတ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်နတ်ဘုရားမသတိပေးခဲ့သည်။
ထိုလူနှင့်အတူသူမ၏ဆက်ဆံရေးဘုရားသခင့စီမံကိန်းသည်နိယာမအပျိုကညာ၏ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ကလေးဖခင် (NB ။ Isis ၏ကိုယ်စားသူမ၏သား Horus nursing, ထိုဗာဂျင်းမာရိသည်သူနာပြုကလေးသခင်ယေရှု၏ပညတ်ကိုယ်စားပြုဖြစ်ကြောင်း) နှင့် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ: (နောက်ပိုင်းတွင်အနောက်ပိုင်းခြေသလုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်: ဖခင်သားနဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် (မိခင်) ပျောက်ကွယ်သွား) ဖခင်, မိခင်, ကလေး။
အဘယ်သူမျှမ function ကိုသို့မဟုတ်ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုမိန်းမတို့အားတားမြစ်ထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အာဖရိကသမိုငျးတှငျအမြိုးသမီးမြားဆရာဝန်များ (Pesechet), ဖါရောဘုရငျ (hatchepsout), ဘုရင်မ (Nzinga) တွေ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (Amani Renas) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး (Tiye), စသည်တို့ ... ဘုရင်မိန်းမနှင့်ညွှန်ကြား အရာကိုလည်းအကြံပေး (ဇနီး, မိခင်) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။
အာဖရိကဘာသာရေးရူပါရုံ၌, ဘုရားသခင်၏လူတို့သညျသလောက်အမျိုးသမီးတွေနှစ်သက်တော်မူ၏။ အဆိုပါဇနီးမောင်နှံထို့နောက်တစ်ခုတည်းဝိညာဉ်ရေးရာစာအိတ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဒါဟာအလှတရားအိုင်ကွန်ကိုအခြားလူမျိုးတို့ကအတိတ်ကာလများတွင်ကျင်းပခဲ့ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာကအနက်ရောင်အလှတရား (ကျမ်းစာထဲမှာ Songs ရဲ့ဥပမာသီချင်း။ သို့မဟုတ်ဘုရင်မကြီး Shaba "ငါသည်အနက်ရောင်နှင့်လှပသောဖြစ်ကြောင်းကို") အကောင်းဆုံးကတော့အတိတ်ခဲ့ကြောင်းငြင်းသက်သေပြပေးပါသည်။
La valeur de soi s’acquiert aussi dans le regard de l’autre. Si le regard des hommes noirs sur les femmes noires est sincère, respectueux, responsable (socialement, économiquement, familialement, culturellement…), valorisant et attentionné, nul doute que cela contribuera à faire rayonner de nouveau la beauté noire dans le monde.[wpdiscuz-feedback id=”4a1m3gu9sd” question=”Qu’en pensez-vous ?” opened=”1″][/wpdiscuz-feedback]
Sakkas 2188 - Lelisa အချိုးမညီသည့် Long Ruffle Jumpsuit ဖယောင်းအိတ်များနှင့်အာဖရိကန်အင်ကာရာဒတ်ခ်ျလူမျိုးများ - ၃၀ - Multi - OS
2 €ကနေ 40,99 အသစ်
€ 40,99 ကိုဝယ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 17, 2020 8:20 pm တွင်၏အဖြစ်
အရောင် ၃၀ မျိုးစုံ
White ကရက်စက်သော - ရို Amelia Uribe Plumelle